नेपाल साफ फाइनलमा आज भारतसंग भिड्दै, कोच अल्मुताईरीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता October 16, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसीप फाइनलमा नेपाल र भारत आज बेलुकी भिड्दैछन्।
पाँच टोली सम्मिलित यस प्रतियोगिता राउण्ड रोबिनको आधारमा चलेको थियो।
समूह चरणमा सम्पूर्ण टोलीले चार चार खेल खेल्दा शीर्ष दुई टोली सोझै फाइनलमा प्रवेश गर्ने मौका पाएका थिए ।
प्रतियोगितामा सम्मिलित सम्पूर्ण टोलीले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाएका थिए।
चार खेल खेलेको नेपालले दुई जित, एक हार र एक बराबरी गर्दै कुल ७ अंक बोकेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको थियो।
भारत भने यस प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गर्ने एकमात्र राष्ट्र बनेको छ, ४ खेलको भारतले २ मा जित र दुई बराबरी खेलेको थियो।
सन् १९९३ देखि सुरु भएको यस प्रतियोगितामा नेपालले आज पहिलोपटक फाइनल खेल्नेछ। यसअघि ३ पटक सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको नेपालले बाँकी संस्करणमा भने समूह चरण बाटै बिदा लिएको थियो।
समूह चरणमा भारत विरुद्ध १-० को हार बेहोरेको नेपाल , हारको बदला सँगै पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर इतिहास रच्ने दौडमा छ।
तर फाइनल खेलमा भने नेपाल र भारतका तर्फबाट दुवै कोचले उपस्थित जनाउने छैनन्। प्रतियोगिताका दौरान दुवै प्रशिक्षकले २ वटा पहेलो कार्ड खाएका कारण उपस्थिति जनाउन नपाउने साफले जनाएको छ। भारतका प्रशिक्षकले रातो कार्ड खाएका कारण स्वाभाविक रुपमै फाइनल गुमाउने भए पनि नेपालको पक्षमा भने साफले आफ्नै नियमलाई टेक्दै अल्मुताईरीलाई फाइनलमा प्रतिबन्ध गरेको हो।
नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताईरी सँगै प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरे रहेका अन्जन विष्टले पनि फाइनल खेल गुमाउने भएका छन्। उनले पनि समूह चरणमा चार खेल खेल्दा २ पहेलो कार्ड पाएका थिए।
अब्दुल्ला अल्मुताईरीले यो खेल नेपालको प्रशिक्षकको भूमिकामा अन्तिम रहने पनि बताइसकेका छन्। बंगलादेश बिरुद्धको खेलपछि मिडियाकर्मी संग आक्रोशित भएका अल्मुताईरीले आफुले एक महिना अघिनै राजिनामा बुझाईसकेको तथा आफु नोकर नभएको भन्दै अब नेपालको प्रशीक्षणमा नफर्कने बताएका थिए।
खेल आज बेलुकी ८:४५ मा माल्दिभ्स राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा हुनेछ।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #hamro nepal sports #nepal vs india #saff championship 2021
इंग्लिस प्रिमीयर लिगमा आज म्यानचेस्टर युनाईटेड र लेस्टर सिटि प्रतिस्पर्धा गर्दै
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| करिब दुई साताको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक पछि आज बाट इंग्लिश प्रिमीयर लिग अन्तर्गत आठौ चरणका खेलहरु सुरु हुदैँछन्। आज बेलुकी हुने खेलमा लेस्टर सिटिले अंग्रेजी महारथी म्यान्चेस्टर युनाईटेडलाई आथित्यता गर्दैछ। म्यानचेस्टर युनाइटेडले सात खेलबाट १४ अंकसहित सिजनको राम्रो सुरुवात गरेको छ र अहिले तालिकाको चौथो स्थानमा छ। […]
रियल मड्रिडबिरुद्दको निराशजनक हार पछि, यसो भन्छन पेप ग्वर्डियोला !!
लिभरपुल लिड्स बिरुद्दको खेलमा बराबरीमा रोकियो !!
मच्छिन्द्र लगातार दोस्रो पटक सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन